Free Download: TuneUp Utilities™ 2010!
ကွန်ပျူတာတစ်လုံးအတွက် မရှိမဖြစ် Program တစ်ခုလို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်။ အသုံးပြုရတာလည်း လွယ်ကူပါတယ်။ သူ့မှာပါတဲ့ 1-Click Maintenace Function ဟာဆိုရင် ကွန်ပျူတာသိပ်မကျွမ်းကျင်သူများပင်လျှင် ကောင်းစွာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Registery ကို အကောင်းဆုံး Fix လုပ်ပေးတဲ့ Function ကိုတော့ အရမ်းနှစ်သက်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုရတာ နှေးကွေးလာပြီဆိုရင် ဒီ Program လေးကို အသုံးပြုပြီး Turbo Mode နဲ့ Run ပေးလိုက်ရင် အရင်ကထက် ပိုမိုပေါ့ပါးစွာ အလုပ်ပြန်လုပ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Enjoy! :)
ယမန်နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာမှ ထူးခြားသတင်း
ဘာမှ မပြောလိုတော့ပါဘူး။ သူတို့ရေးဆွဲတဲ့ဥပဒေကို သူတို့ပဲရွေးကောက်ပွဲလုပ် မေးပေးခိုင်းတော့လည်း သူတို့လူတွေ။ ဒါမှ သူတို့ မနိုင်ရင်လည်း ဘယ်သူမှ နိုင်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဒါကို ဘေးလူက ကံ၊ ဝဋ်ကြွေးပါပဲလို့တော့ ပြောလို့မရတော့ဘူး။ ... ??? ...
SlideShowPro - Nice and Smart Flash Photo Gallery Maker
Web Designer များနှင့် Photographer တွေအတွက် အသုံးဝင်လှတဲ့ Flash Player တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံတွေအပြင် ဗွီဒီယိုတွေပါ ထည့်သွင်း အသုံးပြုနိုင်ပြီး Customize လုပ်ရတာလွယ်ကူတာတွေ့ရပါတယ်။ Adobe Lightroom အတွက် Gallery extension အနေနဲ့လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ်။ နမူနာပုံစံတွေကို ဒီနေရာမှာ ကြည့်ရှူ့နိုင်ပါတယ်။
Invitation for demonstration outside the Canadian High Commission
We would like to invite you to the demonstration that BCUK is organising outside the Canadian High Commission in order to call the government of Canada to supportaUN Commission of Inquiry into war crimes and crimes against humanity in Burma.
Date: 25 - 08 - 2010 (Wednesday)
Venue: In front of the Canadian High Commission, Canada House, Trafalgar Square, London, SW1Y 5BJ
Even though Canadian Government has beenasupporter of human rights and democracy in Burma, it has still not stated its supports foraUN Commission of Inquiry. Through this demonstration, we will effectively apply pressure on the officials in our attempt to persuade them!
Direct Tel: 020 7324 4721
Meeting: UK Parliament Talk
We would like to invite you to our “UK Parliament Talk” meeting on 1st September 2010. It isavery good opportunity to hear the history of Parliament and UK Political Parties system. This meeting is organized by Burma Campaign UK and the speaker will be Jack Speyer.
Jack Speyer OBE isaBurma Campaign UK volunteer who hasaback ground of Political Activity asaLiberal Democrat. He was Chair of Liberal International (British Group) for many years; served on the Liberal Democrat Foreign Affairs Panel and Represented the Liberal Democrats at International Conferences. His interest in Burma goes back to his time as Chair of the Liberal International when he organizeda"Petition on human rights abuses in Burma" that was delivered to the Burma Embassy Signed by many Liberals around the country. He retains personal contact with some Liberal Democrat MP’s and worked with them on Foreign Affairs Policy issues. AsaLiberal Democrat he will also give his views on the cu…
A Cultural Evening with the Karen People of Burma
Date: 28 - 08 - 2010 (Saturday)
Time: 17.00 to 21.00
Venue: St. Ethelburga’s Centre for Reconciliation and Peace 78 Bishopsgate London EC2N 4AG
Cultural and Traditional Done Dance
Traditional Handicrafts, Traditional Clothes and Raffle sale
Little Daughter Book sale
Ticket price Inclusive of Buffet and soft drink
Ticket: Normal price: £10, Solidarity price: £15
May Pearl Tun: may.pearl@burmacampaign.org.uk
Ba Ohn Tin : baohntin@gmail.com
22nd Anniversary of 8888 (UK)
၂၂ နှစ်မြောက် ရှစ်လေးလုံး နှစ်ပတ်လည်နေ့ အခမ်းအနားကို ယူကေရောက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများ ဦးဆောင်ပြီး အခမ်းအနားနှစ်ရပ်ကို အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမအခမ်းအနားအနေဖြင့် ရှစ်လေးလုံး နှစ်ပတ်လည်နေ့ အထိမ်းအမှတ်ဆန္ဒပြပွဲကို လန်ဒန်မြန်မာသံရုံးရှေ့တွင် ၆.၀၈.၂၀၁၀ နေ့က ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါပွဲသို့ လန်ဒန်သို့ ခေတ္တရောက်ရှိနေတဲ့ NCGUB မှ ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာ စိန်ဝင်းကိုယ်တိုင် ပါဝင်တက်ရောက်အားပေးခဲ့တာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ အခမ်းအနားကို နေ့လည် ၁၂ နာရီမှ ၁ နာရီထိ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
Photo : Chan Mya Soe
ဒုတိယအခမ်းအနားအနေဖြင့် SOAS University တွင် ရှစ်လေးလုံးနေ့ အောက်မေ့ဖွယ်အခမ်းအနားကို ၈.၀၈.၂၀၁၀ နေ့က ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါအခမ်းအနားကို နံနက် ၉ နာရီခွဲခန့်တွင် စတင်ပြီး ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ တက်ရောက်လာသည့် အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှ ရှစ်လေးလုံးနေ့ အမှတ်တရစကားများကိုပြောကြားခြင်း၊ ရှစ်လေးလုံး မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံပြခန်း၊ ရှစ်လေးလုံး အောက်မေ့ဖွယ် ပြကွက်အတိုလေးများဖြင့် ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခြင်း စသည်ဖြင့် ရှစ်လေးလုံးတွင် ကျဆုံးသွားသော ရဲဘော်များကို အောက်မေ့ဖွယ် တင်ဆက်ကျင်းပခဲ့ကြပြီး ညနေ ၅ နာရီတွင် အခမ်းအနားကို အောင်မြင်စွာ ရုပ်…
သမိုင်းကြောင်းကို ဇောက်ထိုးမြေလှန် လုပ်ကြံပြောင်းလဲလိုသူများအား UK ရောက် ကျောင်းသားလူငယ်များ၏ ဆန္ဒပြပွဲ
လန်ဒန်ရောက် မြန်မာကျောင်းသားလူငယ်များဦးဆောင်မှုဖြင့် စစ်အစိုးရ၏ ကျောထောက်နောက်ခံ ခိုင်းဖတ်ဖြစ်သည့် မြန်မာအသင်းကြီး(UK)မှကျင်းပပြုလုပ်မည့် စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဆက်လက်တည်မြဲရေး မဲဆွယ်စည်းရုံးပွဲ နှင့် အဆိုပါပွဲသို့ လာရောက်ဖျော်ဖြေသည့် ပြည်သူ့ကျေးဇူးကန်း၊ အမေကျော် ဒွေးတော်လွမ်းနေသည့် (အာရုဏ်ဦးတွင် ဖူးသည့်ကြာ ဇာတ်ကားတွင် သရုပ်ဆောင်ထားကြသည့်)သရုပ်ဆောင်များကို ယနေ့ ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်နေ့ ၂၀၁၀ တွင် ဆန္ဒပြ သပိတ်မှောက်ပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ယူကေရှိ မြန်မာကျောင်းသားများလူငယ် စုံလင်စွာတက်ရောက်ကြပြီး စစ်အစိုးရဖြုတ်ချရေး ကြွေးကြော်သံများ ဟစ်ကျွေးခြင်း၊ တက်ရောက်လာသည့် ကျောင်းသားများမှ မြန်မာအသင်းကြီး (UK) နှင့် ပက်သက်သည့် ရင်တွင်းစကားများပြောကြားခြင်း၊ အသင်းကြီးနှင့် ပက်သက်သည့် အိတ်ဖွင့်ပေးစာများ ဖတ်ကြားခြင်း၊ ကဗျာရွတ်ဖတ်ခြင်း၊ Signature Campaign ပြုလုပ်ခြင်း စသည့် လှုပ်ရှားမှုများဖြင့် တခဲနက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါသည်။ ယနေ့ တက်ရောက်အားပေးကြသည့် ရောင်းရင်းများကို ယူကေရောက် မြန်မာကျောင်းသားများကိုယ်စား အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ၈၈၈၈ (ရှစ်လေးလုံး) နှစ်ပတ်လည်နေ့ ဆန္ဒပြပွဲဖြစ်သည့် ၆.၀၈.၂၀၁၀ တွင် ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါဦးစို…
Demonstration for 22nd Commemoration of 8888 uprising in Burma
8888 uprising wasahistoric and remarkable event for Burma pro-democracy movement.
It wasaday that hundreds of thousands of students, monks, civilian and many more were scarified their lives for freedom and democracy in Burma.
It wasaday that we successfully brought down the Ne Win’s Military Regime.
We all salute to our heroes who were brutally killed by the world worst military junta in 1988 in Burma.
The spirits of 8888 will never die. We promise to our heroes that we will continue fighting for freedom.
On this occasion we would like to invite you to join the demonstration as follows;
Date: 06/08/10 (Friday)
Place: In front of Burma Military Dictator Embassy 19A Charles St London W1J 5DX
NOTE: PLEASE, COME AND JOIN US AT BERKELEY SQUARE GARDEN LONDON W1J 6BY AT 11:30 AM
စစ်အစိုးရ ဒေါက်တိုင် ခိုင်းဖတ်များအားဆန္ဒပြပွဲ (London-UK)
လန်ဒန်ရောက် မြန်မာကျောင်းသားလူငယ်များဦးဆောင်မှုဖြင့် စစ်အစိုးရ၏ ကျောထောက်နောက်ခံ ခိုင်းဖတ်ဖြစ်သည့် မြန်မာအသင်းကြီး(UK)မှကျင်းပပြုလုပ်မည့် စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဆက်လက်တည်မြဲရေး မဲဆွယ်စည်းရုံးပွဲကို ဆန္ဒပြ သပိတ်မှောက်မည်ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာအသင်းကြီး (UK) သည် မြန်မာကျောင်းသားများ လိုအပ်သည့် အကူအညီနှင့် အထောက်အပံ့များကို မပေးသည့်အပြင် မြန်မာကျောင်းသားများကို အသင်းသို့ အဓမ္မဝင်ခိုင်းခြင်း၊ လှုံ့ဆော်စည်းရုံးရေးပွဲများအတွက် မတရားလက်မှတ်ရောင်ချခြင်း၊ သံရုံးထောက်ခံစာများ တောင်းချိန်တွင် ကျောင်းသူကျောင်းသားများထံမှ မတရားငွေညှစ်ခြင်း စသည့်ယုတ်မာရက်စက်သည့်အပြုအမူများကိုပြုလုပ်နေကြပါသည်။
ယခုလာရောက် ဖျော်ဖြေမည့် သရုပ်ဆောင်များသည်လည်း အဆိုပါအသင်းကြီးကို ထောက်ခံအားပေးကာ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဆက်လက်တည်မြဲရေးအတွက် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှ ပံ့ပိုးပေးနေသည့် စစ်အစိုးရ၏အခွင့်ထူးခံ ပြည်သူ့ကျေးဇူးကန်းနေသည့် သရုပ်ဆောင်များ ဖြစ်ကြပါသည်။ ထို့အပြင် အဆိုပါ သရုပ်ဆောင်များသည် စစ်အစိုးရ၏ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ဇာတ်ကားဖြစ်သည့် "အာရုဏ်ဦးတွင် ဖူးသည့်ကြာ" မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဇာတ်ကားတွင် မြန်မာ့ဖြစ်ရပ်မှန်သမိုင်းကြောင်းကို လျစ်လျူရှူကာသမိုင်…
Demonstration for 48th Commemoration of STUDENT MASSACRE in Burma
Date: 07/07/2010 (Wednesday)
Venue: In front of Burmese Embassy 19A Charles Street London W1J 5DX
Kachin Christian Fellowship Fundraising
Date: 10/07/2010 (Saturday)
Time: 15:00pm - 18:00pm
Venue: Western Road, Southall, UB2 5DS London
L Goon Tawng (lgoontawng@yahoo.co.uk)
Seng Pan (msengpan@gmail.com)
Date: 06/08/2010 (Wednesday)
Cultural Evening with the Karen People of Burma
Date: 28/08/2010 (Saturday)
Time: 17:00pm - 21:00pm
Venue: St Ethelburga's Centre for Reconciliation and Peace 78 Bishopsgate, EC2N 4AG
Shar Mwe Hla Tun (sawshar@gmail.com)
Mary Hla (maryaunghla@gmail.com)
Free Burma discussion will be led by Joshua @ Kyaw Zwa (DVB)
Joshua @ Kyaw Zwa reporter who isareporter from Democratic Voice of Burma (DVB).
Burma Campaign UK 28 Charles Square London N1 6HT
We're hoping to show films onceamonth that are about Freedom, Burma and anything related to our struggle for freedom and democracy in Burma. We want the club to beafun, informal place where you can come to watch movies for FREE. If you'd like to suggestamovie to be shown just get …
65th Anniversary of Daw Aung San Suu Kyi's Birthday Celebration Events in UK
လာမည့်် ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့ ၂၀၁၀ တွင် ကျရောက်မည့် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ၆၅ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် အောက်ပါ အစီအစဉ်များကို လန်ဒန်ရောက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများမှ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအတွက် နှစ်ရှည်လများ ပေးဆပ်စတေးနေတဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေဖြင့် မပျက်မကွက် တက်ရောက်ပါဝင်ကြပါရန် လေးစားစွာဖြင့် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
Demonstration for 65th Anniversary of Daw Aung San Suu Kyi
Date: 18 - 06 - 2010 (Friday)
Venue: 19A Charles Street London W1J 5DX
Offering donation to the Buddhist Monks at Sasana Rmsi Vihara - for Daw Suu's Birthday
Date: 19 - 06 - 2010
Venue: SASANA RAMSI VIHARA 83 Booth Road Colindale NW9 5JU London (Colindale Monastery)
Nearest Station: Colindale (Northern Line)
Your contribution of food & donations are cordially invited.
65th Anniversary of Daw Suu' Birthday Celebration…
Invitation for 7th Commemoration of Depaeyin Massacre
You are cordially invited to attend 7th Commemoration of Depaeyin Massacre.
Background story of Depaeyin Massacre
The Depayin Massacre occurred on 30 May 2003, when at least 70 people associated with the National League for Democracy were killed byapremeditated government-sponsored mob in Burma attacking Aung San Suu Kyi's convoy when she was last free from detention. Despite the NLD and Aung San Suu Kyi being the victim of the attack, it was Aung San Suu Kyi who was placed in detention after the Massacre and still remains detained since then.
Click here for more information for YOUTUBE Video
7th Commemoration of Depaeyin Massacre
Date: 30-05-10 (Sunday)
Venue: Barnet Multicultural Community Centre
Algernon Road London NW4 3TA
Algernon Road Hendon London NW4 3TA
Nearest buses: 83, 183, 32, 142
Nearest Train station: Hendon Station (Thameslink)
Travelling from Hendon Centra…
ဇာဂနာ လွတ်မြောက်ရေး ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲ လန်ဒန်တွင် ကျင်းပ
မြစ်ကြီးနားအကျဉ်းထောင်တွင် ၃၅ နှစ် မတရားအကျဉ်းကျခံနေရသည့် နိုင်ငံကျော် ဟာသရုပ်ဆောင်၊ ဒါရိုက်တာ ကိုဇာဂနာ (ခ) ကိုသူရ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး လန်ဒန်မြို့ Tralfagar Square ရှိ Speaker's Corner တွင် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများ၊ မြန်မာအရေးစိတ်ပါဝင်စားသူများ ပါဝင်သော ဆန္ဒပြဖော်ထုတ်ပွဲတစ်ခုကို ယနေ့ကျင်းပပြီးစီးခဲ့သည်။ အခမ်းအနားတွင် ကိုဇာဂနာကို ကိုယ်စားပြုသည့် (Z) အက္ခရာ သရုပ်ဖော်မှု ပြုလုပ်ခြင်း၊ ကိုဇာဂနာပုံပါသည့် ရင်ထိုးများဝတ်ဆင်ခြင်း၊ နာဂစ်မုန်တိုင်းအတွက် ခံစားမှုဖြင့် ကိုဇာဂနာရေးသားထားသည့် ကဗျာကိုဖတ်ကြားခြင်း၊ တက်ရောက်လာသည့် အဖွဲ့စည်းအသီးသီးမှ ကိုဇာဂနာနှင့် ပက်သက်သည့် အမှတ်တရ စကားများပြောကြားခြင်း စသည့် လှုပ်ရှားမှုများကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် Burmese Theratre Workshop မှ Performance Art ဖြင့် ဖျော်ဖြေခဲ့သည့်အပြင် ဦးရွှေရိုး၊ ဒေါ်မိုး အကတို့ဖြင့်လည်း ကပြဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားကို ညနေ ၂ နာရီတွင် စတင်ကျင်းပပြီး ညနေ ၄ နာရီခန့်တွင် အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးခဲ့သည်။
... ကိုဇာဂနာ အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေ ...
ကိုနေဘုန်းလတ် PEN American Center က ချီးမြှင့်သော ၂၀၁၀ ရွှေကလောင်ဆုရရှိ
ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံ ထောင်တွင် နှစ်ရှည် ထောင်ဒဏ် ကျခံနေရသည့် ဘလော့ဂါ ကိုနေဘုန်းလတ်အား လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော် ရေးသားခွင့် အတွက် ကြိုးပမ်းခဲ့ သောကြောင့်၂၀၁၀ ရွှေကလောင်ဆု (2010 PEN/Barbara Goldsmith Freedom to Write Award) ကို ၂၀၁၀ ဧပြီ ၁၄ ရက်နေ့က ပေးအပ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ ရွှေကလောင်ဆု ချီးမြှင့်သည့် အခမ်းအနားကို ဧပြီ ၂၇ ရက်နေ့က အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယောက်မြို့တွင် ကျင်းပကြောင်း သိရသည်။
ကိုနေဘုန်းလတ်ဟာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာဘလော်ဂါတွေအတွက်သာ မဟုတ်ဘဲ NLD လူငယ်တွေအတွက်လည်း လေးစားဂုဏ်ယူရတဲ့ ရှေ့ဆောင်လမ်းပြတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဆု ချီးမြှင့်ခံရတဲ့အတွက် ကိုနေဘုန်းလတ်အစား ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိသလို စစ်ခွေးတွေရဲ့ မတရားချုပ်နှောင်ခံထားရခြင်းမှလည်း အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
ကာတွန်းဆရာ ဘီရုမာရဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် အရပ်ဝတ်ပြောင်းလဲသွားကြတဲ့ မောင်သိန်းစိန်ဦးဆောင်တဲ့ ဝန်ကြီးများအဖွဲ့ကို ပြောင်လှောင်သရော်ထားတဲ့ ကာတွန်းဖြစ်ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲဟာလည်း ဒီပုံစံအတိုင်းဆို သူတို့ပဲ နိုင်မည့်အလားအလာ ပိုပိုပြီးများသွားပါတယ်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကတော့ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပဲ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားဖို့ ကြေငြာချက်ထုတ်ပြီးသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်သူတွေရင်ထဲ စိတ်ထဲမှာ ဘယ်သူ့ကို တက်စေချင်တယ်ဆိုတာက တစ်သတ်မတ်တည်းရှိပြီးသားပါ။ ဒါပေမဲ့ တခြားတစ်ဘက်က ပြန်တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင် ဘယ်သူတက်တက်ပါ ပြည်သူတွေစားဝတ်နေရေးပြေလည်ဖို့နှင့် လူ့အခွင့်ရေးရရှိဖို့က အဓိကပါပဲ။
Voa News မှမြန်မာ့နိုင်ငံရေး အခြေအနေတွေနဲ့ စစ်အစိုးရကို သရော်တဲ့ ကာတွန်းတွေ၊ သရုပ်ဖော်ပုံတွေ ရေးဆွဲနေတဲ့ ရှမ်းတိုင်းရင်းသား ကာတွန်းဆရာ ကိုဟန်လေးကို နယူးယောက် အခြေစိုက် လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့် လေ့လာရေးအဖွဲ့ Human Rights Watch က ဂုဏ်ပြုဆု ချီးမြှင့်လိုက်ပါတယ်။
CNN မှ သတင်းထောက် Dan Rivers မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြန်ပို့ခံရ
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ မတ်လက CNN မှ သတင်းထောက်တစ်ယောက် မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြန်လွှတ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံကို ဝင်ချင်တိုင်းဝင် ထွက်ချင်တိုင်း ထွက်လို့ရတယ်များမှတ်နေလား မသိဘူး :P သတင်းထောက်တွေလည်း ဝင်ပေါက်တွေအများကြီးပါ။ အထူးသဖြင့် နယ်စပ်ပေါ့။ ရှိနေတာပဲ ဒါကို ရန်ကုန်ကနေ တည့်ကြီးဝင်ဝင်နေတယ်။ နိုင်ငံခြားသား သတင်းထောက်မို့တော်သေးတာပေါ့။ ဒါတောင် ဂျပန်သတင်းထောက်ကြီး ဂန့်သွားရှာသေးတယ်။ နော်ဝေက DVB အဖွဲ့သာတွေဆိုရင်တော့ ပိုဆိုးတယ်။ မြန်မာလည်းဖြစ်နေတော့ လုပ်ချင်တိုင်းကို လုပ်နေတော့တာပဲ။ ခဏဆိုပြီး ဆွဲထားတာ တစ်နှစ်လောက်ကြာတယ်။ ဒါတောင် အမိန့်မချရသေးဘူး။ မြန်မာပြည်မှာ သတင်းထောက်လုပ်တာ၊ နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာ တော်ရုံတန်ရုံစိတ်ဓာတ်၊ တော်ရုံတန်ရုံ အရည်အချင်းနဲ့တော့ မရဘူး။ ပင့်ကော်၊ လုပ်ဇာတ်ခင်း၊ ပိုက်ပိုက်ရရုံရေးသားသော သတင်းထောက်များ မပါဝင်ပါ။ ပြည်တွင်းကနေ အမှန်အကန် လုပ်နေတဲ့သူတွေကိုလည်း လေးစားပါတယ်။ အဲလိုသတင်းထောက်တွေ ဘေးအန္တရာယ်လည်း ကင်းရှင်းပါစေ။ ပြည်သူကို တိကျတဲ့ သတင်းမှန်တွေလည်း ဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုအပ်ပါတယ်။
Myanmar removes CNN reporter
Uploaded by CNN_International. - News vid…
Zarganar,aBurmese comedian and film director, and political prisoner. Sentenced to 35 years in prison for sending information about cyclone Nargis to foreign media.
Date: 03- 05 - 2010 (World Day of Freedom of Expression)
Venue: Trafalgar square, London, UK (Nearest station is Charing Cross)
Let’s dance, laugh, speak and make jokes together, in support of Zarganar.
Who? The Free Zarganar Campaign mobilizes several organisations and private citizens from Europe and the Burmese community in exile, in order to demonstrate support and solidarity to Zarganar and to freedom of expression in Burma. Colourful umbrellas will open the event: please bring yours along!
What?aBurmese show combining theatre dance, music and comedy, given by the Burmese community in exile, and testimonies from people who have known Zarganar.
For more information: http://zarganar.blog.free.fr zarganarblog@gmail.com
လန်ဒန်သင်္ကြန် ၂၀၁၀ မှာ လူတွေအားပေးမှုအများဆုံးနှင့် အမြူးကြွဆုံး ဖျော်ဖြေမှု နှစ်ခုကို မျှဝေချင်ပါတယ်။ ပထမတစ်ပုဒ်ကတော့ ရွယ်တူညီမလေးများ ဖျော်ဖြေထားတဲ့ Thingyan Remix and Dance ဖြစ်ပါတယ်။ သီချင်း လေးပုဒ်ကို ရောပြီး Remix လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ရွယ်တူညီမလေးများ ကပြဖျော်ဖြေတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကကွက်တွေရော အကပါ ပိုပြီးကြည့်လို့ကောင်းတာကို မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ လူ ၈ ယောက် Group Dance အနေနှင့် ဖျော်ဖြေတာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့လည်း ကကွက်တွေအများကြီးကို ကြိုးစားပမ်းစားလေ့ကျင့်ထားတဲ့အတွက် ပရိသတ်ရဲ့ အားပေးမှုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီအကထဲမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ မန်းလေးက မန်းလေးသားလေးတစ်ယောက်ကတော့ Underground တွေ ဝင်ကသွားတာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအကတွေအပြင် သင်္ကြန်အကနှင့် သီချင်းတွေ သီဆိုဖျော်ဖြေမှုတွေလည်း ပါဝင်ပါသေးတယ်။ ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ သီချင်းတွေကိုတော့ သင်္ကြန်အမှတ်တရ အနေဖြင့် အခွေထုတ်ပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်း ရန်ပုံငွေအဖြစ်ရောင်းချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
လန်ဒန်မြို့ သာသနရံသီဝိဟာရ ဆရာတော် ဦးဥတ္တရနှင့် ဆရာတော်များ ဦးဆောင်ပြီး ကျင်းပသည့် နှစ်သစ်ကူး သံဃာ့ဒါနဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းလှူပွဲနှင့် မြန်မာ့ရိုးရာအတာသင်္ကြန်ပွဲတော်ကို ဧပြီ ၁၈ ရက်၊ ၂၀၁၀ နေ့က လန်ဒန်မြို့ Greenford Town Hall တွင် အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ မနက်ပိုင်းတွင် သံဃာတော်များကို ဆွမ်းဆပ်ကပ်ခဲ့ပြီး သံဃာတော်များထံမှ ပရိတ်တရားနာယူခဲ့ကြပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး လန်ဒန်ရောက် မြန်မာမိသားစုများမှ သံဃာတော်များကို သံဃာ့ဒါနအဖြစ် ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းလှူကြသည်။ ထို့နောက် ဧည့်ပရိသတ်များအား နေ့လည်စာထမင်းဟင်းဖြင့် ဧည့်ခင်းကျွေးမွေးခဲ့ပါသည်။ ညနေပိုင်း အစီအစဉ်များအဖြစ် သင်္ကြန်သံချပ်များ၊ သင်္ကြန်သီချင်းများ နှင့် တိုင်းရင်းသားရိုးရာအက (မွန်၊ရခိုင်) တို့ဖြင့် ဖျော်ဖြေခဲ့ပြီး အခမ်းအနားကို ည ၁၁ နာရီတွင် အောင်မြင်စွာ ရုပ်သိမ်းခဲ့သည်။ ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်များတွင် လန်ဒန်မှ နန်းအမရ မြန်မာတီးဝိုင်းတို့ဖြင့်တွဲဖက်ဖျော်ဖြေကြပြီး ခေတ်ပေါ်တီးဝိုင်းအနေဖြင့် လန်ဒန်အခြေစိုက် The NOX တီးဝိုင်းက ကုသိုလ်ယူဖျော်ဖြေပေးခဲ့ပါသည်။
ဧည်သည်အဆိုတော် အန်တီမာမာအေးကလည်း ၂၀၁၀ မြန်မာနှစ်သစ်ကူးအတွက် ရေးစပ်သီဆိုထားတဲ့ မင်္ဂလာအမိမြန်မာပြည်ဆိ…
မင်္ဂလာ အမိမြန်မာပြည် အမည်ရတဲ့ သီချင်းကို အန်တီမာမာအေးကိုယ်တိုင် ရေးစပ်ဆီဆိုထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ စာသားတွေကို ကြိုက်လွန်းလို့ အခေါက်ခေါက်အခါခါ နားထောင်နေမိတယ်။ ထို့အတူ လန်ဒန်မှာရောက်ရှိနေတဲ့ အန်တီမာမာအေးနှင့် စကားစမြည်ပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်မှာ အန်တီရဲ့ အနုပညာစွမ်းရည်နှင့် တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးအပေါ် ထားရှိတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို ဂုဏ်ယူလေးစားမိပါတယ်။
မြန်မာနှစ်သစ်ကူးမှာ မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံပါစေလို့ နှုတ်ခွန်းဆက်သလေ့ရှိကြပေမဲ့ ဒီနှစ်ကူးကတော့ မသမာသူတွေရဲ့ ဗုံးဖေါက်ခွဲမှုလက်ချက်ကြောင့် နှစ်စမှာ ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာတွေနဲ့ တွေ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ နောင်မှာ မဖြစ်ပါစေနဲ့တော့လို့ ထပ်ခါထပ်ခါ ဆုတောင်းနေမိပါတယ်။
မြန်မာနှစ်သစ်ကူးပွဲတော်တွေကို ယခုအချိန် ကမ္ဘာ့နေရာအနှံ့အပြားမှာ ဝိုင်းဝန်းသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပနေကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လန်ဒန်ရောက် မြန်မာမိသားစုများ၏ အတာသင်္ကြန်ပွဲတော်ကို မနက်ဖြန်မှာ ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်းပွဲတော်ဟာ လန်ဒန်ရှိ မြန်မာတွေအတွက် အစည်ကားအသိုက်မြိုက်ဆုံးနှင့် ပျော်ရွှင်စရာအကောင်းဆုံးပွဲတော်တစ်ခုလို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ်။ ယခုနှစ်မှာလည်း နိုင်ငံကျော်အဆိုတော် အန်တီမာမာအေး နှင့် ရွှေတံဆိပ် ၁၉ ဆုရ ရွာစားသီရိမောင်မေ…
အန်တီမာမာအေးရဲ့ မုန်းတယ် လို့ အမည်ရတဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ကို မျှဝေချင်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာဖြစ်ပျက်သွားခဲ့တဲ့ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကို ခံစားရေးစပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
သင်္ကြန်မှာ လာတိုက်တဲ့ ငမိုက်သား လူယုတ်မာ ဘယ်က ဟာတွေလဲ။
အမဲဖြစ်ဖြစ် အဖြူဖြစ်ဖြစ် မင်း … လူမှ စစ်ရဲ့လား။ ။
အများ … ဒို့ပြည်သူ ငတ်သူငတ်၊ ပြတ်သူပြတ် လူဖြစ်ကျိုးမနပ်၊ သံချပ်သံ ရပ်။ ။ ကုတ်ကပ်လို့ အပျော်ရှာ သင်္ကြန်မှာ အဖော်အသင်းတွေနဲ့ တေးသီရင်း ကလို့ခုန် ကကြိုးတောင် မစုံသေး ဗုံးပေါက်လို့ ပြေးရသတဲ့ အောင်မယ်လေး ! ကြုံဘူးပေါင် ယုန်ကိုထောင် ကြောင်ကိုမိတယ်လေး ပြည်သူ့ရင်သွေး၊ ဒို့ရင်သွေးတွေမို့ ငါမုန်းတေး သီလိုက်ရဲ့ မဟီသေလာ၊ ၀ဠာတခို အကြိုအကြား သိစေသား။ ။
လူသတ်သမား သနားမရှိ ဒုဂ္ဂတိသွား - အခြားမရှိ မုန်းပါဘိ၊ မုန်းပါဘိ၊ မုန်းပါဘိ။ ။
Free Zarganar! - An afternoon of comedy, poetry, performance and dance
Burma's most famous comedian, Zarganar, is currently servinga35-year prison sentence for his criticism of the Burmese government's handling of Cyclone Nargis which hit Burma on2May 2008. The cyclone devastated the country - more than 140,000 people died and millions were made homeless.
To mark World Press Freedom Day 2010 and to pay tribute to our brave colleague Zarganar, the Free Zarganar Campaign coalition will be holdingalively and colourful afternoon of comedy, poetry, performance and dance at Speaker’s Corner – the home of Free Speech in the UK – and will be calling for his immediate release.
Everyone is welcome to come and join in, so do spread the word! Please wear red to help show your support and bring along an umbrella - the more colourful the better - to take part in our umbrella stunt.
Who is Zarganar?
Burmese poet, comedian, filmmaker and actor, Zarganar, has long been an outspoken critic of Myanmar’s military government. He was most recently arrested on4June…
ဧပြီလ ၄ ရက်နေ့ Bay Area, N. California တွင် မြန်မာမိသားစုများ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော သင်္ကြန်ပွဲအမှတ်တရ ဓာတ်ပုံများဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာတော့ ဗုံးသတင်းကြောင့် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဗျာ။ နှစ်သစ်ကူးကို ညစ်နွမ်းအောင်လုပ်တဲ့အတွက် ကန့်ကွက် ရှုံ့ချပါတယ်။
သင်္ကြန်အကြတ်နေ့ ကန်တော်ကြီးတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲဟု သတင်းရရှိ
ရန်ကုန် ကန်တော်ကြီး x2o မဏ္ဍပ်တဝိုက်မှာ ဗုံးပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ ကြားသိရပါတယ်။ တစ်ယောက်သေပြီး လူအချို့ ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့ သတင်းရရှိပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို ဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။
၃နာရီ ၁၅ မိနစ်။ ကန်တော်ကြီးပတ်လမ်း X2O မဏ္ဍပ်တွင် ဗုံးသုံးလုံး ပေါက်ကွဲ။ လူငါးဦးခန့် သေဆုံး။ မဏ္ဍပ်များအားလုံး ပိတ်ခိုင်းထား။
သေချာပေါက် Confirm ဖြစ်သွားပါပြီ။ Reuters မှာလည်း သတင်းပါလာပြီ။
(Reuters) - At least nine people were killed and 50 wounded in three explosions atanew year water festival in the former Myanmar capital of Yangon on Thursday, witnesses and hospital sources said.
Deadly blasts hit Myanmar festival
At least nine people were killed and more than 60 injured in three explosions atapark in Yangon, Myanmar's commercial hub.
The blasts occurred as revellers gathered foraNew Year water festival in the former capital, an official said on Thursday.
A representative from the British embassy in Myanmar told Al Jazeera that it was not yet known what exactly caused the explosions.
ဆမ်ဘာဝမ်းသင်္ကြန်ကတော့ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကို အတော်ကို ကြိုးစားထိန်းသိမ်းထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီသင်္ကြန်ကို ရည်ရွယ်ချက် နှစ်ခုနှင့် ကျင်းပတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပထမတစ်ခုက အမျိုးဘာသာ သာသနာကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန် ဖြစ်ပြီး ဒုတိယ ရည်ရွယ်ချက်က ပြည်ပရောက် မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များ မြန်မာရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ ထုံးတမ်းများကို သိရှိ၊ မြတ်နိုး၊ တန်ဖိုးထားတတ်စေရန် ဖြစ်ပါတယ်။ အင်မတန်မှ လေးစားအားကျအတုယူဖို့ ကောင်းပါတယ်။ (ဘုန်းဥာဏ်)
ဆမ်ဘာဝမ်သင်္ကြန်အကြောင်း ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖတ်ချင်ရင်တော့ စင်ကာပူမှ ခေတ္တရောက်ရှိနေတဲ့ ဘုန်းဥာဏ်ရဲ့ဘလော့မှာ သွားရောက်ဖတ်ရှု့နိုင်ပါတယ်။ Video တွေအပြည့်အစုံ ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ YouTube က နှင်းဟေမာရဲ့ page မှာ သွားရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါတယ်။
SlideShowPro - Nice and Smart Flash Photo Gallery ...
Invitation for demonstration outside the Canadian ...
သမိုင်းကြောင်းကို ဇောက်ထိုးမြေလှန် လုပ်ကြံပြောင်းလ...
Demonstration for 22nd Commemoration of 8888 upris...
စစ်အစိုးရ ဒေါက်တိုင် ခိုင်းဖတ်များအားဆန္ဒပြပွဲ (Lon...
Invitation for 7th Commemoration of Depaeyin Massa...
ဇာဂနာ လွတ်မြောက်ရေး ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲ လန်ဒန်တွင် ကျင်...